Squarespace: nanangana tranokala Spa miaraka amina fivarotana an-tserasera sy fametrahana fanendrena ao anatin'ny iray andro » Martech Zone
Alarobia, Aprily 15, 2020 Talata, Desambra 15, 2020 Douglas Karr
Raha toa tsy mampino izany dia tsia. Ny sakaizako dia an esthetician sy mpitsabo mpanotra any Fishers, Indiana. Hanangana tranokala iray volana vitsivitsy lasa izay aho, saingy tsy afaka noho ny asan'ny mpanjifa izay natao laharam-pahamehana. Mandrosoa haingana amin'ny famonoana ary maro amin'ireo asa ireo no nandeha teny amoron-dàlana raha niato ny fandraisan'anjaran'ireo mpanjifako na nanova ny laharam-pahamehana hiatrehana ny fatiantoka azo.
Raha hanangana tranokala amin'ny WordPress aho dia mety ho nandany plugins fampidirana amina herinandro na roa samihafa, vavahady fandoavam-bola ary hitady karazana vahaolana amin'ny fandaharam-potoana. Satria tsy dia liana amin'ny haitao i Steph, mety ho sarotra taminy koa ny nitantana azy. Ka nanapa-kevitra ny haka ny Squarespace aho.
Nanomboka nanangana ilay tranokala tokony ho tamin'ny 8:00 maraina aho… ary nahafinaritra ahy tokoa ka nandramako hatramin'ny 4:00 maraina ny ampitso maraina rehefa vita izany. Ny zavatra azoko notanterahina dia nahafinaritra - aza misalasala tsindrio ary hijerena ilay tranonkala.
Koa satria mihidy amin'ny alàlan'ny areti-mandringana i spaoro Steph amin'izao fotoana izao, dia naniry ny hampiakatra ny tranokala izy ary hanampy ny olon-kafa hividy karatra fanomezana… na dia hanary fihenam-bidy aza raha ho an'ny mpandray voalohany na mpiasan'ny fahasalamana ilay karatra fanomezana. Vitako ny nahatanteraka izany rehetra izany.
Ny sehatr'asa rehetra ao anaty iray an'ny Squarespace dia manome anao izay rehetra ilainao amin'ny fampandehanana ny orinasanao. Na vao manomboka ianao na marika efa napetraka dia manampy amin'ny fitomboan'ny tranokalan'ny orinasanao ny sehatra misy azy ireo. Squarespace dia manana fanavaozana sy safidy maromaro izay ankehitriny misy fihenam-bidy na maimaim-poana mandritra ny krizy COVID-19 ihany koa.
Tao anatin'ny 24 ora latsaka dia naoriko daholo ny zava-drehetra nefa tsy nisy kaody iray akory:
Tranonkala mamaly feno sy mamaly tanteraka
Mpanonta tranokala fanovana eo an-toerana
Bara fampandrenesana manerana ny tampon'ny tranonkala
Ecommerce ho an'ny varotra vokatra
Varotra karatra fanomezana
Fandaharam-potoana fanendrena miaraka amin'ny fampahatsiahivana mailaka sy hafatra an-tsoratra
Fampidirana tetiandro eo amin'ny fandaharam-potoana fanendrena sy Google
Fandraisana an-tanana sy famoronana newsletter mailaka
Famoronana kaody fihenam-bidy
Fampidirana vavahady fandoavam-bola amin'ny Square ho an'ny varotra POS ao amin'ny spa-ny
Fampidirana vavahady fandoavam-bola amin'ny PayPal amin'ny varotra an-tserasera
Bilaogy iray hizaran'i Steph vaovao sy fanavaozana
Ny sehatr'asan'i Squarespace dia manana làlana fianarana, fa ny fanampiana an-tserasera sy ny fampianarana azy ireo dia manome ny fampahalalana ilainao rehetra. Ny fandefasana azy rehetra hiasa dia tsy nisy seamless tanteraka, fa akaiky. Ohatra, ny fandaharam-potoana fanendrena sy ny ecommerce dia fizarana roa samy hafa amin'ny tranonkala izay samy mila ny fampidirana vavahady fandoavam-bola.
Ary, Squarespace dia manana rafitra fonosana tsara tarehy… saika ny zavatra rehetra ilaiko mba hahomby ny zava-drehetra dia fanavaozana ny fonosana vaovao. Tsy mitaraina aho, fa miomàna hamely ny bokotra fanavaozana fotoana vitsy rehefa hitanao ireo fiasa ilainao hahazoana izay ilainao rehetra. Ny fananganana tranokala iray manontolo ao anatin'ny iray na roa andro latsaky ny $ 1,000 isan-taona miaraka amin'ireo endri-javatra rehetra ireo dia mahavariana!
The Fandaharam-potoana Squarespace Ny fanavaozana dia manana izay ilainao rehetra amin'ny fampandehanana ny orinasanao manokana izay mitaky fanendrena anao. Serivisy ho an'ny mpanjifanao tanteraka miaraka amina endrika amina taonina:
Kalandrie fandrindrana - Havaozy ho azy ireo kalandrie efa ampiasainao, toa an'i Google, Outlook, iCloud, na Office 365.
Ny fandoavam-bola aloa - Ampidiro amina processeur d'exploitation handoavana mora ny mpanjifa mialoha na aorian'ny fotoana voatondro.
Video Conferencing - Na aiza na aiza misy ny mpanjifanao, miresaka mivantana amin'ny fampidirana GoToMeeting, Zoom, ary JoinMe.
Fifandraisana namboarina - Mandefasa ho azy ny fanamafisana, fampahatsiahivana ary fanarahana marika. Amboary ny zava-drehetra mba hifanaraka amin'ny bika aman'orinasa misy anao.
Famandrihana, karatra fanomezana ary fonosana - Ampiasao ny mpanjifanao amin'ny fampidirana fomba maro hamandrihana. (Misy amin'ny drafitra voafantina.)
Fomba fampidirana manokana - Mianara momba ny mpanjifa vaovao na fantaro amin'ny mpanjifa miverina amin'ny endrika fampiasa mahazatra.
Fananganana fivarotana an-tserasera mivarotra vokatra niomerika na nalefa ara-batana dia mora amin'ny Squarespace. Izy ireo aza dia manana fanampiana ho an'ny fandefasana trano fisakafoanana izay mety ho mora ampiasaina mandritra io fanidiana io. Anisan'ireo endrika ecommerce:
Shop - Varotra, mandrindra, ary mitantana vokatra tsy voafetra miaraka amin'ny tag, sokajy ary fitaovana fanasoketana drag-and-drop antsika.
Fampidirana votoaty - Ny vokatra tsirairay amidinao dia apetraka ao anaty katalaogera ka mora ny mampiasa azy indray amin'ny lahatsoratra bilaogy sy fampielezana mailaka.
fandaharam-potoana - Mialoha ny varotra, ny fampiroboroboana ary ny lisitry ny vokatra vaovao amin'ny alàlan'ny fandaharanao ny vokatra hiseho amin'ny daty voatondro.
Inventory - Tantano ny lisitry ny tahirinao amin'ny alàlan'ny interface mora ampiasaina ary ny fijerena haingana ireo fiovaovanao sy ny haavon'ny tahiry. Azonao atao aza ny manangana fanairana.
Karatra fanomezana - Ny karatra fanomezana dia fomba iray mora hizaran'ny mpanjifa ny vokatrao amin'ny fianakaviany sy ny namany.
famandrihana - Miteraka fidiram-bola miverimberina ary manangana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa amin'ny fivarotana famandrihana amin'ny vokatrao isan-kerinandro na isam-bolana.
Fampidirana ny vavahady - Raiso ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny fampidirana ao amin'ny indostria miaraka amin'ny Stripe sy PayPal.
Customization Customization - ampio ny fanadihadian'ny mpanjifa na ny safidy hizarana hafatra manome.
Fandefasana - Mahazoa tombana amin'ny fandefasana entana any ho any ho an'ny mpanjifa US mandritra ny fizahana amin'ny alàlan'ny fitaovana fampidirana mahery sy fampidirana
hevitra - Ny safidy dia miainga amin'ny boaty famerenana HTML tsotra ka mampiditra mivantana ny hevitry ny mpanjifa avy amin'ny Facebook.
Social Integration - Zarao mora foana amin'ny Facebook, Twitter, ary Pinterest ireo vokatrao, ary asio marika ireo vokatrao amin'ny hafatrao Instagram.
Marketing amin'ny mailaka Squarespace
Integrated marketing amin'ny mailaka ao amin'ny Squarespace tena tsara… tsy misy fampidirana an-tsokosoko mihitsy. Anisan'izany ny:
automatique - Tongasoa ireo mpamandrika amin'ny lisitry ny mailakao, andefaso fihenam-bidy ho an'ny mpikambana vaovao, ary bebe kokoa amin'ny mailaka mandeha ho azy. Mijanona ao an-tsaina indrindra ary manorata fifandraisana amin'ireo mpihaino anao nefa aza maika ny mandefa.
Fitantanana lisitra fifandraisana amin'ny intuitive - Manafatra lisitry ny mailaka, manangana am-pahendrena azy ireo amin'ny sehatry ny mailaka eo amin'ny tranokalanao, na mamorona lisitra vaovao ho an'ny fampielezan-kevitra.
Personalization - Ampidiro ao amin'ny tsipika na votoatin'ny fampielezankevitra ny anaran'ny mpanjifanao mba hanampianao mikasika manokana ny fampielezana rehetra alefanao.
Squarespace koa dia manana rindranasa fanovana finday lehibe Apple ary Android, ahafahan'ny tompona orinasa manova ny tranokalany amin'ny findainy.
Ny sehatra Internet rehetra dia manana tanjaka sy fahalemena. Mazava ho azy, ny sehatra fampivoarana manokana dia afaka manome fahafaha-manao tsy manam-petra raha oharina amin'ny sehatra toa ny Squarespace. Na izany aza, ny tombotsoan'ny sehatra matanjaka rehetra toa an'io dia mihoatra ny fetra iray kilaometatra. Ary tsy takatry ny saina ny vidiny.
Ny olana tokana hitako tamin'ny fananganana ny tranokala dia ny hoe misy olon-tiako indraindray tonga ny olona ary maniry ny handoa manokana fa tsy amin'ny Internet. Mampalahelo fa ny Squarespace POS dia tsara ho an'ny entana fivarotana ecommerce, fa ny karazana fanendrena dia tsy miseho amin'ny fampiharana hampandoa azy ireo mivantana.
Ary koa, na dia ampidirina ho mpikirakira fandoavam-bola aza ny Square dia tsy misy fomba fampifanarahana ireo karazana fanendrena ao anatin'ny Kianja. Raha ny tena izy, tsy misy akory fitaovana hanondranana mora foana ny fampahalalana noho ny fanafarana ao amin'ny Kianja. Vokatr'izany dia tsy maintsy nampidiriko an-tanana ny karazana fanendrena rehetra sy ny add-on tao amin'ny kaonty Square vadiko. Manantena aho fa hampidirina tsy ho ela ny endri-javatra ilaina!
Tsidiho ny Squarespace
Fanamarihana… Tsy mpiara-miasa amin'i Squarespace aho… mpankafy fotsiny. Tsy manolotra mpiara-miasa amin'ny mponina Indiana izy ireo. Tena gaga fotsiny aho tamin'ny lampihazo sy ny fomba vitako nahavita ny tranokalan'i Steph!
Tags: rehetra-in-iraytetiandro fanendrenafandaharam-potoana fanendrenaecommerceOvay-in-toeranafanomezana karatraproduct reviewsfihaonambe horonantsarytranokala tranonkala